Warar dheeraad ah oo haatan kusoo kordhay xaaladda Sheekh Mukhtaar Roobow Abuu Mansuur – Bulshoweyn.com | Your Source Of News And Entertainment
Warar dheeraad ah oo haatan kusoo kordhay xaaladda Sheekh Mukhtaar Roobow Abuu Mansuur
Wararkii ugu dambeeyay ee naga soo gaaraya gobolka Bakool ayaa sheegaya in maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya ay ciidamo aad u badan u direen deegaanka Abal, halkaas oo uu haatan ku sugan yahay Sheekh Mukhtaar Roobow Cali Abuu Mansuur.
Deegaanka Abal oo qiyaastii 18km u jirta degmada Xudur ee gobolka Bakool ayaa la sheegayaa inay haatan hareeyeen dagaalyahano ka tirsan Al-shabaab oo doonaya inay qaarajiyaan Sheekh Mukhtaar Roobow Cali Abuu Mansuur.
Maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa la sheegayaa inay ciidamo aad u badan maanta u direen deegaanka Abaal, si ay gacan u siiyaan Sheekh Mukhtaar Roobow Cali Abuu Mansuur oo la filaayo in maleeshiyaadka isaga taageersan ay dagaal ku qaadaan dagaalyahanadda Al-shabaab.
Arrintaan ayaa la sheegayaa inay ka dambeysay, kadib markii dagaalyahano ka tirsan Xarakada Al-shabaab ay ku dhawaadeen saldhig uu Sheekh Roobow kaga sugan yahay degaanka Abaal oo qiyaastii 18km u jirta degmada Xudur ee xarunta gobolka Bakool.
Dowladda Mareykanka ayaa dhawaan shaacisay inay liiska argagaxisada ka saartay Sheekh Mukhtaar Roobow Cali Abuu Mansuur oo ay hore lacag gaareysa 5 milyan doollar madaxiisa dul dhigtay.
Al-shabaab oo arrinkaasi dareen ka muujiyay ayaa haatan qorsheeynaya inay weerar qaarajin ah ku qaadaan Sheekh Mukhtaar Roobow Cali Abuu Mansuur, oo hore uga tirsanaa madaxda sare ee Al-shabaab.
Sheekh Mukhtaar Roobow ayaa ururka Al-shabaab isaga baxay, kadib markii uu khilaaf baahsan soo kala dhex-galay hoggaamiyihii hore ee Al-shabaab Axmed Cabdi Godane, kaas oo sanadkii 2014-ka lagu dilay duqeymo ay diyaaradaha Mareykanka ka geysteen deegaanka Haawaay ee gobolka Sh/hoose.